Bangladesh: Tolotra Finday Ikarakarana Ny Fahasalaman’ny Ho Renim-pianakaviana Sy Ny Tera-bao · Global Voices teny Malagasy
Bangladesh: Tolotra Finday Ikarakarana Ny Fahasalaman'ny Ho Renim-pianakaviana Sy Ny Tera-bao	Voadika ny 30 Desambra 2012 15:11 GMT
Zarao: Mahery ny 98 tapitrisa ny isa tontalin'ireo mpampiasa Finday any Bangladesh ankehitriny ary ny ampahany betsaka amin'izy ireo dia vehivavy avokoa. Vao haingana izay no nanombohana tolotra fitandroana ny fahasalaman'ny renim-pianakaviana izay hikendrena ity vahoaka ity amin'ny alalan'ny finday. Aponjon dia finday mifototra amin'ny tolotra momba ny fahasalamana ho an'ireo ho renim-pianakaviana sy ireo tera-bao any Bangladesh eo ambanin'ireo famantaran'ny Mobile Alliance for Maternal Action (MAMA). Tolotra amin'ny vidiny mirary dia mirary izany, maimai-poana ho an'ireo 20 isanjaton'ny mpampiasa azy mahantra indrindra ary mikatsaka ny hampihenana ny aretina sy ny fahafatesana mahazo ireo renim-pianakaviana sy ireo zaza menavava. Kirsten Gagnaire, manoratra tamin'ny Talen'ny Fiaraha-miasan'ny MAMA Eran-tany:
Sary famantarana ny Aponjon. Mampiseho izany fa manan-danja eo amin'ny fitandroana ny fahasalaman'ireo renim-pianakaviana ny fiahian'ireo raim-pianakaviana sy ireo mpikambana hafa ao anatin'ny ankohonana. Sary nalaina teo ambany famelan'ny vohikalan'ny Apojon.
Aponjon, izay midika hoe “namana atokisana” amin'ny Bengali, dia tolotra novolavolain'ireo mpiara-miasa anatin'ny Mobile Alliance for Maternal Action (MAMA) any Bangladesh. Mifantoka amin'ny fanomezana hafatra an'ireo renim-pianakaviana amin'ny alalan'ireo finday izay mizara fahalalana ny amin'ny fomba hikarakarana ny tenany sy ny zanany mandritra ny fotoana mahabevohoka azy ka hatramin'ny herintaonan'ny nahaterahany. Toetra iray iavahan'ny Aponjon ny fananany tolotra iray natokana indrindra ho an'ireo mpiambi-trano, satria izy ireo no manapa-kevitra ny momba ny fikarakarana ny fianakaviana sy ny fitantanam-bola. Matetika dia mpiara-miasa ireo mpiambi- trano, renim-pianakaviana, rafozam-bavy, rahavavy sy ireo endrika hafa eo amin'ny vondrom-piarahamonina. Manamafy ireo hafatra azon'ireo vehivavy avy amin'ny alalan'ny tolotra mifantoka amin'ny renim-pianakaviana ny hafatry ny Aponjon, nefa manindry ny anjara asa goavana lalaovin'izy ireo amin'ny fitandroana ny fahasalaman'ny vohoka, ny fahaterahana sy ny fahazazana ary ireo zavatra iainana mahafinaritra ho an'ny fianakaviany.
Tamin'ny Septambra 2011 no nampahafantarina tany amin'ireo toerana 13 any amin'ireo distrika efatra any Bangladesh miaraka amin'ireo mpampiasa 1200 anatinà fototra fitarihana ny tolotra Aponjon . Ho famenoana ny fitarihana lavorary, nanomboka ny hetsika eo amin'ny sehatra nasionaly ny Aponjon. Mikendry ny hahatratra mihoatra ny 2 tapitrisa, isan'izany ireo vehivavy sy ireo tera-bao ny Aponjon amin'ny 2015. Ny Toe-pahasalaman'ny Reny sy ny Zanaka any Bangladesh
Samy avo ny taha-pahafatesan'ny Reny sy ny zanaka any Bangladesh. Araka ny tatitra iray, isaky ny 45 minitra dia vehivavy iray no maty noho ny fahasarotan'ny vohoka na ny fiterahana. Isaky ny 4 minitra, misy zaza menavava latsaky ny 1 volana maty noho ny tsy nahazoan'ny renin'izy fikarakarana aoriana sy alohan'ny fiterahana. Na eo aza izany, nandritra ireo roapolo taona lasa, nitarika fihenàna goavana teo amin'ny taha-pahafatesan'ny reny sy ny zanaka any Bangladesh ireo ezaka lehibe teo amin'ny sehatra nasionaly sy tao an-toerana. Nidina avy amin'ny fahafatesana 97 isaky ny 1.000 teraka tamin'ny 1990 ka lasa 37 isaky ny 1.000 teraka tamin'ny 2011 ny taha-pahafatesan'ny zaza. Nandritra io vanim-potoana io ihany, nilatsaka 50 isanjato ny fahafatesana aorian'ny fiterahana, ary nilatsaka 67 isanjato ny fahafatesana ambanin'ny faha-5 taona.
Asha Rani, vehivavy 24 taona faly amin'ny fanambadiany ary manana zanaka roa, mipetraka any amin'ny ambanitanànan'i Vashantek any Mirpur, iray amin'ireo ambanitanàna feno olona indrindra any amin'ny tanàndehiben'i Dhaka. Taorian'ny nahaterahan'ny zanany faharoa no nahalalàny ny momba ny “aponjon” avy aminà mpiasan'ny fahasalamana ary nanoratra ny anarany izy. Faly amin'io tolotra io ny tenany:
“Ah…raha ny marina, izao vao fantatro fa tokony hitana ny zanakovavy eo amin'ny soroko mandritra ny minitra vitsivitsy aho aorian'ny nanomezako nono azy. Tsy mandoa intsony izy ary afaka ny ahiahiko. Nanampy ahy hahazo tsy tapaka an'ireo hafatra momba ny fahasalamana mikasika ny fomba fanabeazana zaza sy ny fikarakarana ny fahasalamako izany.”
Tanatin'ireo taona vitsy lasa, nipariaka faingana tany ambanivohitr'i
Bangladesh ny finday. Ankehitriny dia voarakotry ny tambajotra anà finday ny ankamaroan'i Bangladesh. Araka izany dia mpanelanelana tsara mihitsy ny finday handefasana sy handraisana fampahalalana. Nanoratra tanati-nà lahatsoratra navoaka tao amin'ny Daily Star ny Dr. Fida Mehran:
Taona vitsy lasa izay tsy nandalo an-tsaina mihitsy fa ho lasa fitaovana fampiasan'ny daholobe ny finday; fa na ireo vahoaka ao anatin'ny fahantrana aza dia afaka hividy finday, hianatra hiantso sy handray antso, eny na hianatra hamaky sy hanoratra simaiso vitsivitsy aza. Koa satria vitan'ny finday ny mampiasa sy manaparitaka ny tambajotra any Bangladesh, dia lasa media tsara indrindra hanaparitahana fampahalalana sy fanairana ny finday.
Tantaran'ny Bangladesh farany 3 andro izayAzia AtsimoMety Ho An'ireo Fiteny Rehetra Any Azia Atsimo Ny Rindrambaiko OCR (Optical Character Recognition) An'ny Google
6 andro izayAzia AtsimoAzo Heverina Ve Izany Hoe Bangladesh Sakaizan'ny Ankizy Kokoa?
4 herinandro izayAzia AtsimoMaherin'ny 100 Ireo Olona Novonoina Ivelan'ny Fitsaràna Tany Bangladesh Tamin'ity Taona Ity
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা
FahasalamànaFampandrosoanaMediam-bahoakaTeknolojiaVehivavy sy MiralentaVonjy Voina